Vavaky ny ady mba handrava ny herin'ny fanahy mahery setra | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Vavaky ny ady mba handrava ny herin'ny fanahy mahery setra
Vavaky ny ady mba handrava ny herin'ny fanahy mahery setra
Janoary 15, 2020
Lioka 10:19 Indro, omeko anao ny hanitsaka ny menarana sy maingoka ary handresy ny hery rehetra ananan'ny fahavalo, ka tsy hisy handratra anao.
Ady ny fiainana ary ny mahery setra indrindra ao amin'ny Fanahy ihany no velona. Ny tontolon'izao tontolo izao dia fehezin'ny devoly sy ny demoniany, izay maneho ny tenany amin'ny alàlan'ny sambo olombelona. Androany isika dia handray anjara amin'ny vavaka ady handrava ny herin'ny fanahy mahery setra. Amin'ny maha mpino an'i Kristy antsika, dia nomen'Andriamanitra fahefana amin'ny demonia rehetra isika. Ireo fanahy mahery setra dia tsy afaka manakana ny kristiana rehetra mahalala ny toetrany ara-panahy tsy hahomby. Manana fahefana hanimba sy handringana azy ireo isika na rahoviana na dia akaiky ny fonenanay aza.
Ireo Vavaky ny ady dia vavaka manafintohina, vavaka izay hanery an'ity hery mahery setra ity izay miady amin'ny hoavintsika ary mamerina ny herintsika amin'ny alàlan'ny hery. Alohan'ny handehanantsika amin'ireto vavaky ny ady ireto dia avelao hianatra lesona momba ny fanahy mahery setra.
Inona ny fanahy mahery setra?
Ratsy sy ratsy ny fanahy mahery setra herin'ny maizina, manohitra ny zanak'Andriamanitra tsy handroso amin'ny fiainana. Ireo fanahy ireo dia ao ambadiky ny endrika rehetra manelingelina anao ary miaina amin'ny làlambe mankany an-tampony isika. Ny fanahy mahery setra dia fanahy ao ambadiky ny fiverimberina, tsy fahombiazana amin'ny fahatapahan'ny lozam-pifamoivoizana ary ireo karazana fanakorontana rehetra eo amin'ny fiainana.
Ireo fanahy ireo koa dia fanahin'ny fisafotofotoana, hitondra korontana foana amin'ny fiainanao izy raha haingana dia haingana fandrosoana amin'ny fiainana. Amin'ny maha-mpino antsika, dia tokony ho mailo isika hahalala rehefa miasa ireo fanahy ratsy ireo. Tokony hahatohitra azy ireo amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra isika.
Na izany aza, misy famantarana sasantsasany tadiavina, raha tsy fantatra hafa raha iharan'ny fanahy mahery setra ianao. Hitantsika ao anatin'ny fotoana fohy ireo famantarana ireo.
7 famantarana ny fanahy mahery setra
1. Herisetra: Ny famantarana voalohany ny fanahy mahery setra azonao amin'ny fiainanao dia sakana izany. Tsikaritrao fotsiny fa misy hery manery anao hampitsahatra anao amin'ny fotoana rehetra. Ireo sakana ireo dia afaka miseho amin'ny alàlan'ny olona iray, vondrona na fikambanana na fiankinan-doha. Raha mbola mijanona amin'ny fiainanao io hery io, dia hitohy hatrany ny fandrosoana. Androany dia hafahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao.
2: Ireo fanahy mahery setra dia afaka mitazona anao amin'ny toerana iray ihany mandritra ny fotoana maharitra. Fihenjanana dia tsy misy fivoarana. Ary fantatsika rehetra fa tsy misy mijanona ho mitovy amin'ny fiainana, na mandroso izany na mamerina miverina. Midika izany fa ireo fanahy ireo dia afaka mitazona anao amin'ny toetra mijaly foana. Rehefa mandinika ny fiainanao ianao ary mahatsikaritra fa tsy mandroso amin'ny làlana ianao dia fantaro fa mila miatrika izany herisetra mahery vaika izany ianao.
3. Diso fanantenana: Midika izany fa mampanantena ary tsy mahomby. Ny tsy fatiantoka eo amin'ny fifandraisana, ny fanambadiana, ny mpandraharaha, ny orinasan-tena sns dia ireo fitaovam-panahin'ireo fanahy mahery setra rehetra. Ny olona mampanantena anao ary tsy mahomby dia mety mahakivy anao. Ny marina dia izao, ireo olona izay mampanantena hanampy anao fa tena tso-po, fa ny ataon'ireo fanahy mahery setra ity dia ny manohitra ny mpanampy anao, ka ny fananana azy ireo hanana ny loharanon'izy ireo amin'ny fotoana hanatanterahana ny fampanantenany. Mety ho traikefa tena mahatsiravina io, hitako fa mandresy amin'ny anaran'i Jesosy ianao.
4. Famoronana: Very fanantenana lalandava daholo ny olona iharan'ny herisetra. Ny tsy fahombiazana amin'ny zavatra rehetra ezahinao hatao dia azo antoka fa hampisy fahasosorana. Betsaka ny mpino no nivily ary napetrany tao ny faharatsiana noho ny hasarotry ny fiainana. Izany no asan'ny fanahy mahery setra. Fa anio hariva, ny lohalika rehetra dia tokony hiondrika amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Adihevitra: Ny fifandirana dia midika fotsiny hoe mampiteraka olana eo aminareo sy izay afaka manampy ny anjaranao. Ny ataon'ity fanahy ity dia ny hahazoana antoka fa tsy milamina amin'ny olona rehetra afaka manampy anao amin'ny fiainana ianao. Na izany aza, hitanao fa diso izy ireo na mahita hadisoana ao aminao. Ity hery ratsy ity koa dia ao ambadiky ny ady rehetra ao amin'ny fianakaviana sy ny faritra hafa amin'ny fiainanao. Anio Andriamanitry ny lanitra dia hanome anao fandresena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
6. Ny alahelo: Ny fanahin'ny fahaketrahana dia toe-tsaina mahery setra. Ny famoizam-po dia toe-javatra iray izay hivoahan'ny olanao anao.Depressess dia mitarika ny famonoan-tena ary ireo no toe-tsaina mahery setra amin'ny asa. Fa anio no andro fanafahana anao.
7. Ny fahakiviana: Io no tanjona voalohany amin'ireo fanahy mahery setra, mba hampahery anao amin'Andriamanitra sy ny zava-drehetra. Ny toetran'ny fahakiviana no antony mahatonga ny mpino mihemotra ary miverina amin'ny tontolon'ny ota sy ny alahelo. Ny lehilahy paling malahelo eto an-tany dia tsy olona mahantra fa lehilahy kivy be. Amin'ny fotoana mahakivy anao, mamoy fo ianao, fotoana mahamenatra, tapitra ny adinao, fotoam-baovao no eto izao, anio dia handresy ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao.
Ahoana no fomba handresena ireo fanahy mahery setra?
Nandresy ny fanahy mahery setra ianao tamin'ny herisetra finoana ary ny vavaka mpiady. Tsy maintsy manohitra izany hery izany ianao amin'ny finoana matanjaka amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny vavaka miady amin'ny ady mafy. Ny devoly dia handositra foana amin'ny fiainanao raha sendra fanoherana mahery vaika izy. Ireo vavaky ny ady hiadiana amin'ny herin'ny fanahy mahery dia ny fitaovam-piadiana manelatanao mba hampielezana ny fanahy mahery rehetra miady amin'ny anjaranao. Androany, amin'ny alàlan'ireto vavaky ny ady izao, ianao hanenjika ny devoly, hahatratra azy ary hamerina izay rehetra nangalariny taminao. Entinao fito heny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Tonga ny fanafahana anao.
1. Ray ô, misaotra anao aho noho ny nanomezany hery ahy ireo hery maizina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
2. Ray ô, avelao ny heloko rehetra ary diovy aho amin'ny tsy fahamarinana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
3. Ravaiko ny vavahadin'ny fanahy mahery setra miasa amiko ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
4. Nongotako ny fiarovana mafy rehetra misy herisetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
5. Izaho dia manafoana ny hery rehetra amin'ny fanahy mahery setra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
6. Manorotoro ny lohan'ny fanahy mahery rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho
7. Mitsangana aho ary maka ny fananako amin-kery izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
8. Ny rojika demony rehetra mitazona ny fiainako miparitaka amin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
9. Ny lamba fasana rehetra miady amin'ny faratako, mandrehitra lavenona ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
10. Maniry ny fanambarana ratsy rehetra aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
11. Ny vavaka ratsy rehetra dia nikasa hamono ahy tamin'ny afo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy
12. Ny rojom-razana rehetra mitazona ny fiainako dia miparitaka amin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
13. Mampifandray ny tenako amin'ny firaisana demonia rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
14. Manafaka ny tenako avy amin'ny fatoran'ny razana rehetra aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
15. Ry Tompo, ampitomboinao ny anaran'i Jesosy Kristy
16. Ny fambolena ratsy rehetra ao amin'ny vatako dia esorina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
17. Ny fanekena rehetra natao tamin'ny fanontaniako dia levon'ny afo ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
18. Ny herbalista rehetra miasa amiko dia haringana ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
19. Ireo fahavalonao mafy loha rehetra eo amin'ny fiainako dia mamely ny tenanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
20. Mampitsahatra ny fahoriana amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho
21. Mampitsahatra ny aretina amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho
22. Mampitsahatra ny fahantrana amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho
23. Ny hatsarana rehetra izay nandalo ahy, miverena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
24. Izaho dia manapotika ny mpandray anjara amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
25. Ny fahasahiranana hita, dia ho rava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
26. Ny tsingerin'ny faharatsiana rehetra, ho tapaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
27. Manda ny fihemorana ao amin'ny fiainako aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
28. Ity no taonan'ny hafainganam-pandehan'ny hery ambony noho ny fandrosoako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
29. Manambara aho fa voantso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho
30. Ambarako fa afaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho
Misaotra anao Jesosy Kristy.
Previous lahatsoratraVavaky ny andro 3 ary ny fifadian-kanina hamotehana ny tsingerin'ny fianianan'ny fianakaviana
Next lahatsoratraVavaky ny ady mba hahitana faminaniana tanteraka
Teboka vavaka mba hamongorana ny kaikitry ny alika amin'ny nofy
Vavaka 30 hahombiazana amin'ny fanadinana
Vavaka ho an'ny fandresena amin'ny raharaham-pitsarana